May 2013 ~ Myanmar News Updates
12:03:00 PM Myanmar News Updates No comments
အရင်ဆုံး မိမိဖုန်းရဲ့ Setting >More>Mobile Network>Access Point Names နေရာမှာဖြည့်သွင်းပေးရမှာပါ
10:25:00 AM Myanmar News Updates No comments
( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့ )
သိမ်ဖြူငွေလဲကောင်တာ ( နံနက်ပိုင်း @ ၁၀:၄၅ မိနစ်)
ဒေါ်လာ >> ၁ ဒေါ်လာ = ၉၃၈ - ၉၄၈ ကျပ်
[ ၀ယ်ဈေး = ၉၃၈ ကျပ် // ရောင်းဈေး = ၉၄၈ ကျပ် ]
ဒေါ်လာ >> ၁ ဒေါ်လာ = ၉၃၉ - ၉၄၂ ကျပ်
[ ၀ယ်ဈေး = ၉၃၉ ကျပ် // ရောင်းဈေး = ၉၄၂ ကျပ် ]
သိမ်ဖြူငွေလဲကောင်တာ ( နေ့ လည်ပိုင်း @ ၁၂:၃၀ မိနစ်)
ရန်ကုန်ဈေးကွက် ( နေ့ လည်ပိုင်း @ ၁၂:၃၀ မိနစ်)
ဒေါ်လာ >> ၁ ဒေါ်လာ = ၉၄၂ - ၉၄၃ ကျပ်
[ ၀ယ်ဈေး = ၉၄၂ ကျပ် // ရောင်းဈေး = ၉၄၃ ကျပ် ]
သိမ်ဖြူငွေလဲကောင်တာ ( ညနေပိုင်း @ ၃:၃၀ မိနစ်)
ရန်ကုန်ဈေးကွက် ( ညနေပိုင်း @ ၃:၃၀ မိနစ်)
ဒေါ်လာ >> ၁ ဒေါ်လာ = ၉၄၂ - ၉၄၄.၅ ကျပ်
[ ၀ယ်ဈေး = ၉၄၂ ကျပ် // ရောင်းဈေး = ၉၄၄.၅ ကျပ် ]
10:24:00 AM Myanmar News Updates No comments
မနက်ပိုင်း ( ၁၀:၄၅ မိနစ် ) - ၇၀၉,၅၀၀ ကျပ်
နေ့ လည်ပိုင်း ( ၁၂:၃၀ မိနစ် ) - ၇၁၁,၅၀၀ ကျပ်
ညနေပိုင်း ( ၃:၃၀ မိနစ် ) - ၇၁၁,၀၀၀ ကျပ်
နေ့ လည်ပိုင်း ( ၁၂:၃၀ မိနစ် ) - ၇၁၁,၀၀၀ ကျပ်
ညနေပိုင်း ( ၃:၃၀ မိနစ် ) - ၇၁၀,၅၀၀ ကျပ်
မနက်ပိုင်း ( ၁၀:၄၅ မိနစ် ) - ၁၃၉၄ ဒေါ်လာ/အောင်စ
နေ့ လည်ပိုင်း ( ၁၂:၃၀ မိနစ် ) - ၁၄၀၄ ဒေါ်လာ/အောင်စ
ညနေပိုင်း ( ၃:၃၀ မိနစ် ) - ၁၄၀၆ ဒေါ်လာ/အောင်စ
ရွှေဈေးနှုန်းသည် အချိန်နှင့်နေရာပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
10:19:00 AM Myanmar News Updates No comments
1 အမေရိကန် USD = Ks 938(~) Ks 948(~)
1 စင်္ကာပူ SGD = Ks 739(~) Ks 751 (~)
1 ဥရောပငွေ EUR = Ks 1213 (~) Ks 1231 (~)
စင်ကာပူ SGD 1.2611 (+0.0034)
ထိုင်း Baht 30.1300(~)
မလေးရှား Ringgit 3.0725(-0.0010)
တရုတ် Yuan 6.1380(+0.0025)
အိန္ဒိယ Rupee 56.3900(~)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Taka 77.8700 (~)
တောင်ကိုရီးယား Won 1126.4500(-1.0500)
ထိုင်ဝမ် TWD 29.9370(-0.1250)
ဂျပန် Yen 100.9855(+0.2255)
ဥရောပငွေ EUR 0.7670(+0.0006)
သြစတြေးလျ AUD 1.0345(-0.0004)
အင်္ဂလန် GBP 0.6568(+0.0006)
1 အောင်စ USD 1420.1500(+9.7001)
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၂/ ၅) ဇာတ်သိမ်းခန်းလေးပါ
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၂/ ၄)
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၂/ ၃)
10:35:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၂/ ၂)
10:31:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၂/ ၁)
10:27:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၁/ ၅)
10:06:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကြည်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၁/ ၄)
10:03:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၁/ ၃)
9:56:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၁/ ၂)
9:55:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၁/ ၁)
9:49:00 PM Myanmar News Updates No comments
9:28:00 PM Myanmar News Updates No comments
9:01:00 PM Myanmar News Updates No comments
လမ်းလျှောက်တာက စိတ်ကျရော ဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာလျော့ပါး စေတယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တွေအရ သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာက တချို့ လူတွေမှာ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ ဝေဒနာတွေ ကို သိသိသာသာ သက်သာလျော့ပါးစေ တယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုရလဒ်ကို စိတ်ကျန်း မာရေးဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာကြောင့် ဦးနှောက်ထဲ မှာ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဓာတ်တွေ အထွက်တိုးလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့် တက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တည်ငြိမ် သွားစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူမှုဆက်ဆံ ရေးမှာ သွက်လက်လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ယုံကြည်မှုတိုးလာစေပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် အရက် သောက်မယ့်အစား ခပ်သွက်သွက် လမ်း လျှောက်လိုက်ပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ အဝလွန်နိုင်ခြေ များနေ ရင် တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက် ခပ်သွက် သွက်လမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအ ရ အဝလွန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ထက် ဝက်ခန့် လျော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီ လေ့လာမှုကို ဟားဗတ်ကျောင်းရှိ ပြည် သူ့ကျန်းမာရေးဘာသာရပ် လေ့လာမှုအ ရ တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ]]လေ့လာမှု အရ တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက် ခပ်သွက် သွက်လမ်းလျှောက်ပေးရင် အဝလွန်နိုင် ခြေများတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုကို ထက် ဝက်နီးပါးလျော့ကျစေနိုင်တယ်"လို့ လေ့ လာသူ ကွီဘင်က ဆိုပါတယ်။" နောက် တစ်ချက်အနေနဲ့ ပြောရရင် တစ်နေ့ လေး နာရီလောက် တီဗီကြည့်ပြီး အထိုင်များ တာက အဝလွန်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုး နိုင်ခြေကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုတိုးမြင့်စေ ပါတယ်" လို့ ထပ်မံရှင်းပြပါတယ်။
သွေး တွင်း မကောင်းတဲ့ ကို လက်စထရောများပြီး ကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော လျော့နည်း နေသလား၊
ရိုးစင်းလွယ်ကူတဲ့ လမ်းလျှောက် လေ့ကျင့်ခန်းကတောင် မကောင်းတဲ့ ကို လက်စထရောကို လျော့ကျစေနိုင်ပါ တယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ သွေးထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထ ရောအဆင့်မြင့်မားနေတာက နှလုံးရော ဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များပြီး ကောင်းတဲ့ ကိုလက် စထရောအဆင့် များနေတာက နှလုံး ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ သက်လတ်ပိုင်းအ မျိုးသားတွေအနေနဲ့ မိနစ် ၃၀ လောက် လမ်းလျှောက်ပေးတာက တစ်နေ့မှာ ကယ်လိုရီ ၃၀ဝ လောက် လောင်ကျွမ်းပြီး နှလုံးသွေးကြောတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာကို ကောင်းစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာက နှလုံးသွေးကြော တွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ ထရိုင်ဂလစ်စရိုက် အဆီကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုတွေ များနေသလား၊
အဝလွန်တာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အစိတ်အ ပိုင်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်မှာ အဆီ ပိုတွေ များနေရင် လမ်းလျှောက်ပေးသင့် ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ခြေလှမ်း တစ်သောင်းလျှောက်ပေးတာက ခန္ဓာ ကိုယ်အဆီကို လျော့ကျစေပြီး ကိုယ်အ လေးချိန်ကိုလည်း လျော့ကျစေတယ်လို့ အသက် ၅၀နဲ့ ၇၀ကြားအမျိုးသမီးတွေ ကို လေ့လာတဲ့ ကနေဒါလေ့လာမှုတစ် ရပ်အရ သိရပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန် ရှိသူတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ ခြေလှမ်း ၇၅၀ဝ လျှောက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အ လေးချိန်များသူတွေကတော့ ခြေလှမ်း ၇၅၀ဝနဲ့ တစ်သောင်းကြား လှမ်းဖို့ လိုပါ တယ်။
အထိုင်များတဲ့ ဘဝနေထိုင်စား သောက်မှုပုံစံကြောင့် ညောင်းညာကိုက် ခဲနေတဲ့သူတွေဟာ လမ်းလျှောက်လေ့ ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာ ၂၀ ရာခိုင် နှုန်းခန့် စွမ်းအင်တိုးတက်လာပြီး ညောင်း ညာကိုက်ခဲမှုက ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျ သွားတာကို လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါ တယ်။ နာတာရှည်ဖျားနာဝေဒနာ ခံစားနေ ရသူတွေ လမ်းလျှောက်ပေးရင် ညောင်း ညာကိုက်ခဲမှု သိသိသာသာ လျော့ကျ သွားတတ်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတိုးမြှင့် ဖို့ လိုအပ်နေသလား၊
တစ်နေ့ မိနစ် ၃၀ လောက် လမ်း လျှောက်တာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ လူနာတွေမှာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တိုးမြင့် လာစေကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရပါ တယ်။ အကြောင်းကတော့ လမ်းလျှောက် နေစဉ်အတွင်း စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ အန်ဒေါ်ဖင်ဟော်မုန်းအထွက်နှုန်း တိုး လာတဲ့အတွက် စိတ်ကျကုသဆေးထက် ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် အာနိသင်ရရှိစေ တာကြောင့်ပါ။
8:59:00 PM Myanmar News Updates No comments
(၃) အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုဝေ ဒနာများကို သက်သာစေနိုင်
အဝင်း Ref: WMD
Chlorine (ကလိုရင်း) ရဲ့အဆိုးအကောင်း သိကောင်းစရာ မှတ်တမ်း
ကလိုရင်း (Cl) သည် သိပ္ပံနယ်ပယ်တွင်သာမကသိပ္ပံနှင့် မရင်းနှီးသော သာမန် လူများကပင် အသိများသည့် ဓာတုဒြပ်စင်ဖြစ်သည်..(အထူးသဖြင့် ရေကန် ရေထဲ့များတွင် ထည့်ရသည်ဟု အသိပိုများပါသည် )
ကလိုရင်း (Cl)သည် ရေသန့်စင်ခြင်း၊ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးနှင့် အရောင်ချွတ် အရောင်တင်ဓာတ်ငွေ့ အတွက် အဓိကအရေးပါသော ဓာတုဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ကလိုရင်း (Cl)ကို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ တိုက်ရိုက်သုံးခြင်းနှင့် သွယ်ဝိုက်သုံးခြင်းသာကွာသည်။ စက္ကူထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေး(အနာရောဂါပိုး)၊ဆိုးဆေးများ၊အစားအစာ၊အင်းဆက်ပိုးမွှားသတ်ဆေး၊အိမ်သုတ်ဆေး (ပန်းချီဆေး၊သဘောင်္ သုတ်ဆေး) ၊ပလပ်စတက်များ၊ ဆေးဝါးများ၊ ချည်မျှင်နှင့် အထည် လုပ်ငန်းများ၊ နှင့်တခြားသော စားသောက်ကုန်-လူသုံးကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုကြသည်။
ထို့အပြင် သောက်သုံးရေများရှိ ဘက်တီးရီးယားနှင့် အခြားသောအရာများ သန့်စင်ရန် အတွက်လည်း ကလိုရင်း (Cl)ကို အသုံးပြုကြသည်။ကလိုရင်း (Cl)သည် စက္ကူများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် သစ်သားပျော့ဖတ်များကပ်ပါ မနေအောင် (သန့်စင်နေအောင်) ချွတ်ဆေးအနေဖြင့် ပါဝင်နေသကဲ့သို့ သုံးပြီးသား စက္ကူများများကို မင်များဖယ်ရှားပြီး အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရရန်အတွက် ကလိုရင်း (Cl)ကို အစားထိုးအသုံးပြုသည့်အခါ အော်ဂဲနက် ဒြပ်ပေါင်းများတွင် လိုချင်သော ဂုဏ်သတ္တိများရရန် ၄င်းက ပေးစွမ်းဆောင် ရွက်နိုင်သဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
ထို့ကြောင့် ကလိုရင်း (Cl)ကို အော်ဂဲနက်ဓာတုဗေဒတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသည်၊၊ (အထူးသဖြင့်- ကလိုရိုဒ်(Chlorates)၊မေ့ဆေး( ကလိုရိုဖော) (Chloroform)၊ ကာဗွန်တြာကလိုရိုက်(Carbon tetrachloride) နှင့် ဘရိုမင်း(Bromine) ထုတ်ဖော်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။)
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ .......
ကလိုရင်း (Cl) သည် ဓာတ်ပြုအားကောင်းသော ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ သဘာဝအားဖြင့် တွေ့ရသော ဒြပ်စင်လည်း ဖြစ်သည်။အီသိုင်လင်း ဒိုင်ကလိုရိုက် (ethylene dichloride) နှင့် အခြားသော ကလိုရင်းဆက်စပ် ပျော်ရည်များ၊ပိုလီဗင်နိုင်းလိ ကလိုရိုက်(Polyvinyl chloride (PVC))များ၊ ကလိုရိုဖရူလိုကာဗွန်(Chlorofluorocarbonds)နှင့် ပလိုပိုင်လင်း အောက်ဆိုဒ် (Prpylene oxide) များတွင်ုကလိုရင်း (Cl) ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
စက္ကူများချွတ်ရန် စက္ကူကုမ္ဗဏီများတွင် ကလိုရင်း (Cl) ကို အသုံးပြုသည်။ရေနှင့် ညစ်ညမ်းရေများသန့်စင်သည့် စက်ရုံများတွင် ရောဂါပိုးများ နှင့်တခြားသော ညစ်ညမ်းစေသော အရာများ ကင်းစင်သန့်ရှင်းသော ရေအဆင့်ရရန်အတွက် ကလိုရင်း (Cl) ကို အသုံးပြုကြသည်။
လေ -ရေ- မြေ တွင်ပါဝင်နေသော ကလိုရင်း (Cl) များသည် အလုပ်ခွင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ကလိုရင်း (Cl) သည်ရှူရှိုက်လိုက်သော လေမှ လည်းကောင်း၊ စားသောက်လိုက်သောအစာနှင့် ရေမှ လည်းကောင်း ခန္ဒာကိုယ်အတွင်း ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်။ သို့သော် ၄င်း၏ဓာတ်ပြမှုစွမ်းများကြောင့် ခန္ဒာကိုယ် အတွင်းပိုင်းတွင် ကျန်နေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် ကလိုရင်း (Cl) အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ – ကလိုရင်း (Cl)ပမာဏ ဘယ်လောက် များများပါရှိမှု၊ ဘေးဖြစ်မှုအချိန်နှင့် အကြိမ်အရေအတွက် အပေါ်မှာမူတည်ပေသည်။ထို့ အပြင် လူ၏ကျမ္မာရေး နှင့် ဘေးသက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေပေါ်မှာလည်း တည်မှီးနေသည်။
ကလိုရင်း (Cl)ပမာဏ အနည်းငယ်ကိုရှူမိပါက အချိန်အတိုအတွင်း အသက်ရှူမှု စနစ် တစ်ခုလုံးကို အကျိုးယုတ်ဘေးသင့်စေနိုင်သည်။ ချောင်းဆိုး ရင်ကြပ်ခြင်းနှင့် အဆုတ်ကိုပါ ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေသည်။ အရေပြား၊ မျက်လုံးနှင့် အသက်ရှူမှုစနစ်ကို လည်း ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။ ထိသို့သောုအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ သာမန်အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့ရှိရသည်မှာ အလွန်နည်းသည်။ နေဒဏ်ထိတွေ့မှုများသောကြောင့် ဆံပင်များပိုပြီးမာကျောကျွတ်ဆတ် ပျက်စီး လွယ်စေသည်သာမက (အထူးသဖြင့်ဆံပင်များကို အရောင်ဆိုးထားသောသူတွေမှာပိုမိုပျက်စီးကာ နှစ်ခွကွဲစေသည်ဟု နယူးယောက်ဆေးပညာစင်တာက အလှအပရေးရာဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ကဆိုထားသည်။)
ကလိုရင်း (Chlorine) ပါဝင်သော ဆံပင်ဆိုးဆေးများသုံးထားသည့်အခါ နေရောင် ဒဏ်က အဲဒီဆံပင်တွေကို အရောင်မွဲခြောက်နှစ်ခွကွဲတာ ပိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆံပင်ဆေး ဆိုးထားသူများအနေဖြင့် အသုံးပြုမယ့်ဆံပင်အလှကုန်တွေထဲမှာ UV ကာကွယ်မှုပါ မပါကြည့်ဖို့ လိုအပ်သည်သာမက အပြင်နေရောင်ထဲသွားတဲ့အချိန်တိုင်း ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်ကဲ့သို့ ရှာထိုး အပြည့်ပါသော ဦးထုပ်မျိုးဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ နွေရာသီတွင် ဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေးအတွက် UV ဒဏ်ကာကွယ်တဲ့ရှမ်ပူ၊ အားဖြည့်ဆေး (Conditioner) နှင့် စပရေးများ ကိုသုံးပေးဖိုလိုအပ်ပေသည်။ ကလိုရင်း (Chlorine)့ ဖြန်းထားသော ရေကူးကန်များတွင် ရေကူး ရာတွင်လည်း ခုခံကာကွယ်နိုင်သည့် အ၀တ်စုံများကို ၀တ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကလိုရင်း၏ အကျိုးသက် ရောက်မှုကို တွန်းလှန်ကာကွယ်နိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ .......
ကလိုရင်း (Cl) သည် ရေနှင့်ရောသည့်အခါ ရေတွင်ပျော်ဝင်သည်။ ရေမှတဆင့် လေထဲသို့ အငွေ့ပျံနိုင်သော အခြေအနေသို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ ကလိုရင်း (Cl)ကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ တိုက်ရိုက် ထုတ်ပေးနေမှုအများဆုံးမှာ ရေနှင့်လေ ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေများတွင် ကလိုရင်း (Cl)သည် တခြားသော ဓာတုဆိုင်ရာများနှင့် ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ ၄င်းသည် ရေထဲရှိ အင်အော်ဂဲနစ် ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ကလိုရိုက် ဆားများ ရရှိနိုင်သကဲ့သို့ အော်ဂဲနစ် ပစ္စည်းများ နှင့်ပေါင်းစပ်သည့်အခါ ကလိုရင်းပါဝင်သော အော်ဂဲနစ် ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၄င်း၏ ဓာတ်ပြုမှု အားကောင်းမှုကြောင့် မြေကြီးထဲတွင် ရွေ့လျားမှုမရှိနိုင်သကဲ့သို့ မြေအောက်ရေများတွင်လည်း ၀င်ရောက် နေရာ ယူမှုမှာလည်း မရှိပေ။ အပင်နှင့် သတ္တ၀ါများမှာလည်း ကလိုရင်း သိုလှောင်နိုင်မှုမရှိပေ။ သို့သော်လည်း ဓာတ်ခွဲခန်း လေ့လာမှုများတွင် လေထုထဲရှိ ကလိုရင်းသည် ခုခံအားစနစ်၊ သွေး၊ နှလုံး နှင့် အသက်ရှူမှု စနစ်တစ်ခုလုံးကို ဘေးသင့်စေနိုင်ကြောင်း အထပ်ထပ်ပြဆိုလျက် ရှိပေသည်။ အလွန်နိမ့်သော အဆင့်တွင်ပင် ကလိုရင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။ အထူးသဖြင့် ကလိုရင်းသည် ရေ နှင့် မြေရှိ သက်ရှိအဖွဲ့အစည်း (living organisms) ကို ဆိုးကျိုး များစွာပေးနိုင်သည်။
8:52:00 PM Myanmar News Updates No comments
လားရှိုးအာဏာပိုင်တွေက ပုဒ်မ ၁၄၄ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ ကြေညာထားပေမယ့်လည်း ဒီနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းကစပြီး လူအုပ်စုတစုက ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့မှာ မနေ့က အမျိုးသမီးတဦး ဓာတ်ဆီနဲ့လောင်းပြီး မီးရှို့ခံရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း အဆောက်အဦ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ညတွင်းချင်း အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားတာပါ။
မျက်မြင်ဒေသခံတဦးက “လူအုပ်ကြီး ဆိုင်ကယ်တွေ၊ သုံးဘီးတွေနဲ့ ရွေ့လျားသွားနေတော့ ဟိုဘက်လုံခြုံရေးချ ဒီဘက်သွား၊ ဒီဘက်ချ ဟိုသွားနဲ့ ဟိုရွေ့ဒီရွေ့ဖြစ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံကို ခဲနဲ့ထုတယ်၊ ကျက်တန်းတခုက စားသောက်ဆိုင်တွေကို ဖျက်တယ်၊ သာရေးနာရေးကားတွေကို မီးရှို့လိုက်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကို သတင်းရယူနေတဲ့ အိုင်စီဂျေ သတင်းထောက် ၂ ဦး လည်း ၇ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူအုပ်စုတစုရဲ့ ရိုက်နှက်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
အိုင်စီဂျေသတင်းသမားက “ကျနော်ကိုယ်တိုင် အရိုက်ခံရတယ်။ ခေါင်းကွဲသွားတယ်။ ရပ်ကွက် ၇ ထဲမှာပါ။ ကျနော်နဲ့အတူပါလာတဲ့သူက ကျောကုန်းမှာ အရိုက်ခံရတယ်။ ကျနော်တို့ ကင်မရာကို ဘေးမှာလွယ်ပြီး အခြေအနေကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်အုပ်လိုက်ကြီးက လာတယ်။ ပြီးတော့ ပြေးဆင်းလာပြီး ကျနော့်ကင်မရာကို ဆွဲယူတယ်။ ကျနော့်ဘေးက သူငယ်ချင်းရဲ့ ကင်မရာကို ဆွဲယူတယ်။ မင်းတို့က မှတ်တမ်းရိုက်တာလားဆိုပြီး ဆွဲယူတော့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြောတယ်။ အဲမှ ကင်မရာပေးဆိုပြီး ယူတယ်။ ကျနော်တို့က ကင်မရာတော့ မယူနဲ့၊ Memory Card မန်မိုရီကတ်ပဲ ယူသွားပါဆိုပြီး ကတ်တွေ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။”
ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ လားရှိုးမြို့ခံ ဦးစိုင်းမြင့်မောင်ကလည်း ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက စပြီး ဆူပူမှုတွေ ထပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ ရပ်ကွက်ထဲက သီတာအေး ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းပိုင်း မီးလောင်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ရာ ၇ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဈေးဆိုင်ဖျက်ဆီးမှုတွေရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်စ ထပ်ဖြစ်တယ်။ သီတာအေးရုပ်ရှင်ရုံ ၁ ရုံကို မီးရှို့တယ်။ အတွင်းဘက် လောင်တယ် ပြောတယ်။ အပြင်ဘက် ဆိုင်တန်းတွေ ရှို့တယ်။ ပိုင်ရှင်က ပန်းသေးဗျ။ နောက် ရပ်ကွက် ၇ ထဲက ဗလီတခုဆီ သွားတယ်ပြောတယ်။ ဖျက်သလား၊ မဖျက်သလား မသိဘူး။ ကျနော်သိသလောက်ဆို ရပ်ကွက်ကလူတွေ ဦးဆောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဦးဆောင်သူတွေက ဒီမြို့မှာ မျက်မှန်းတန်းမိနေသူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောတယ်။”
မေ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ၈ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဦးနေ၀င်းဆိုသူက ဓာတ်ဆီရောင်းသူ ဒေါ်အေးအေးဝင်းကို ဓာတ်ဆီနဲ့ ပက်ပြီး မီးရှို့ခဲ့ရာက လူအုပ်စုကြား မကျေနပ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားပြီး ၂၊ ၃၊ ၇ နဲ့ ၉ ရပ်ကွက်တွေက ဗလီတခု၊ မိဘမဲ့ကျောင်းတကျောင်း၊ ဗလီဆရာသင်တန်းကျောင်းတကျောင်း မီးရှို့ခံရပြီး ဈေးဆိုင်ပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၀ ဆိုင်နဲ့ နေအိမ် ၃ လုံး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
မီးရှို့ခံရသူ ဒေါ်အေးအေးဝင်းကို မြို့ခံတွေက လားရှိုးဆေးရုံမှာ ပို့ဆောင်ကုသထားပြီး ဦးနေ၀င်းကိုတော့ အမှတ် ၁ မြို့မရဲစခန်းက အရေးယူထားပြီး လုံခြုံရေးတွေလည်း တိုးမြှင့်ချထားပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်မောင်ရှိန်ကတော့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပျက်မှုတွေက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောတွေလိုပဲ တပုံစံတည်းလို ဖြစ်နေတာ မကောင်းကြောင်းနဲ့ လူ ၂ ဦးချင်း ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကို တရားဥပဒေနဲ့သာ ဖြေရှင်းသင့်ပြီး အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ မဖျက်ဆီးသင့်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်တွေ၊ အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒီနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက လားရှိုးမြို့တော်ခန်းမမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုဟာ ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အရှေ့တောင်အာရှ
8:50:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အရှေ့တောင်အာရှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု ယူနစ် ကဏ္ဍခွဲ မန်နေဂျာမစ္စဂျူလီယာဖရေဆာ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အရှေ့တောင်အာရှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ယူနစ်ကဏ္ဍခွဲ မန်နေဂျာ မစ္စ ဂျူလီယာဖရေဆာ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ဒုတိယသမ္မတနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဇင်ယော်၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအုန်းသန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်သိမ်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ မြစ်ကြောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီး စွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
8:41:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကောင်လေး ။ ။ နင်ငါ့ကိုချစ်လားဟင် ?
ကောင်မလေး ။ ။ အင်း အရမ်းချစ်တယ် ....
ကောင်လေး ။ ။ ခုချိန်မှာ ငါသေသွားရင်နင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဟင် ?
ကောင်မလေး ။ ။ နင်သေသွားရင် ငါတစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ကောင်မလေး ။ ။ နင့်ကိုလည်း ငါအရမ်းချစ်ပါတယ် ငါတို့သေတဲ့အထိလက်တွဲမဖြုတ်ကြေးနော်
ကောင်လေး ။ ။ အင်း... ကတိ ♥♥♥♥
* Cruel J-Kid * ( ခံစားချက်စာတိုလေးများ)
ဓာတ်ပုံကို ဖုန်းထဲက ပြင်ဖို့ပုံပေါ်မှာ မြန်မာစာရေးဖို့ အဆင်ပြေစေတဲ့ ဆော့ဝဲ
8:18:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ဓာတ်ပုံကို ဖုန်းထဲကနေ ပြုပြင်မယ့် ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ။ပုံပေါ်မှာ
စာရေးချင်တယ်ဆိုလည်း အရောင် စာလုံး ဒီဇိုင်းအများကြီးပါပါတယ်။ နမူနာ စမ်းပီး
လုပ်ကြည့် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ။ နှစ်ကိုယ်ခွဲ လုပ်ချင်တာ ခေါင်းဖြတ်ဆက်ချင်တာ
အဆင်ပြေတယ် ပုံပေါ်မှာ စာရေးရင် မြန်မာစာ မြင်ရတာမို့ ကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေး
အဆင်ပြေစေတဲ့ဆော့ဝဲလေဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဇိုင်းတွေ ဘောင်တွေ ရုပ်ပြောင်တွေနဲ့ 
ထူးထူးခြားအလှဆင်လို့ ရပါပြီ ။ အထူးခြားဆုံးကတော့ မြန်မာစာရေးလို့ ရခြင်းပါပဲ
ဒီဇိုင်းလုပ် ကာလာပြင်တာ အလင်းအမှောင် အဖြူအမည်း စုံအောင် စိတ်ကြိုက်
ပြုပြင်လို့ ရပါတယ်.အသေးစိတ်ပြုပြင်ဖို့Tools တွေ အတော်များပါလာပါတယ်.။
Android phone အတွက် သုံးသမျှဆော့ဝဲထဲမှာ ဒါလေးတစ်ခုပဲ မြန်မာစာရဖူးတယ်
Facebook 3.2 Apk (17.93 Mb) Direct Download
Facebook အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် (9.5.2013) Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗားရှင်းအသစ်မှာ ဘာတွေ ပိုလာလည်းဆိုရင် ဓာတ်ပုံထဲဝင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို အလွယ်တကူ Tag လုပ်လို့ရပါတယ် ပြီးတော့ ၀ါသနာတူ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးတော့ ချက်ဖို့အတွက်
ဂရုချက်လုပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးပါလာပါတယ် မားကတ်ထဲဝင်မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
8:03:00 PM Myanmar News Updates No comments
USB ကနေ Virus တွေ မကူးစက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲ
3:00:00 PM Myanmar News Updates2comments
ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကို ၀င်ဝင်မွှေနေတဲ့ Virus , Malware , Worm တွေကို
အဓိက ကူးစက်ခံရတာကတော့ USB က များပါတယ် အချို့ က အင်တာနက်က ကူးစက်တာပါ
အခု ဒီဆော့ဝဲလေးက USB ကနေ Worm တွေ ကို စစ်ပေးမယ်
မိမိစက်ထဲကို မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ပေးမှာပါ Scan လုပ်ရာမှာလည်း
နာမည်က USB Worm Protection 1.1 Build 2009.02.02 ဖိုင်ဆိုဒ်က
17.1 MB ပါ
Download >> http://www.tusfiles.net/7iinmmjt77o3
2:56:00 PM Myanmar News Updates No comments
အသက်(၈၀)အရွယ်ရှိဂျပန်တောင်တက်သမားယူအိချီရိုမီအူရာသည် ဧ၀ရက်တောင် ထိပ်ကိုရောက် ရှိသောအသက်အကြီးဆုံးလူအဖြစ်စံချိန်ချိုး ကာကြာသပတေးနေ့ ကတောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။မစ္စတာမီအူရာသည် နှလုံးခွဲစိတ်မှု(၄)ကြိမ်လုပ်ထားသော်လည်းဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်ကို(၂၀၁၃
)ခုနှစ်ကပထမအကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊နောက်(၅)နှစ်အကြာတွင် ထပ်မံရောက် ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ သူသည် တောင်ထိပ်ကိုထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပြီဆိုသည့် အကြောင်းကိုမိသားစုထံသို့ ဖုန်းဆက်ပြောခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ပြီးမသေမပျောက်ဘဲပြန်လည် ဆင်းလာနိုင်ခြင်း မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းလှကြောင်းတောင်တက်သမားများ ကပြောကြားခဲ့သည်။မစ္စတာမီအူရာသည် ၎င်း၏သားအပါအ၀င်အခြား ဂျပန်တောင်တက်သမား(၃)ဦးနှင့် နီပေါလူမျိုးလမ်းပြ(၆)ဦးတို့နှင့် အတူ
ဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်း တွင်ဖော်ပြထားသည်။
2:47:00 PM Myanmar News Updates No comments
တယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်မှာသာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Down ရန်>> http://www.solidfiles.com/d/750e650629/
တစ်ထောင့်ငါးရာတန် ဖုန်းတွေအတွက် အင်တာနက်Setting ထည...
ကြယ်စင်မော်ကွန်း မြန်မာ ဇာတ်ကားကောင်း(၂/ ၅) ဇာတ်သိ...
ဓာတ်ပုံကို ဖုန်းထဲက ပြင်ဖို့ပုံပေါ်မှာ မြန်မာစာရေ...
USB ကနေ Virus တွေ မကူးစက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် ...